Ifantohana Indray Ny Fankahalana Afrikana Ao India Taorian’ny Daroka Nahafatesana Lehilahy Kongoley Iray · Global Voices teny Malagasy
Ifantohana Indray Ny Fankahalana Afrikana Ao India Taorian'ny Daroka Nahafatesana Lehilahy Kongoley Iray
Voadika ny 10 Jona 2016 7:05 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, عربي, Swahili, English
Ny fitsaram-bahoaka tsy misy antra namono mpianatra Nizeriana telo tao Delhi tamin'ny Septambra 2014. Dikasary avy amin'ny lahatsary “Tsy misy Firenena Ho An'ny Mainty Hoditra”
Herinandro vitsivitsy lasa izay, maty nodarohan‘ny lehilahy telo tao amin'ny faritr'i Vasant Kunj Atsimon'i Delhi i Masonga Kitanda Olivier, 23 taona, avy any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo. Nifindra tany India i Olivier hanovo fianarana amin'ny oniversite, ary nanomboka nampianatra teny frantsay vao haingana tao amin'ny ivontoerana tsy miankina iray. Voalaza fa ireo namono azy dia nampiasa teny fanompana ara-poko teo am-pamonoana azy.
Tsy trangan-kerisetra tokana vao haingana atao amin'ny olompirenena Afrikana ao India izany. Tamin'ny 25 May, novelesina tamin'ny baravy taorian'ny fifamaliana tamin'olana fiantsonan'ny fiara tamin'ny tompon-tànana tao an-tanànan'i Hyderabad i Bamilola Kazim, mpianatra Nizeriana, 26 taona. Notsaboina tao amin'ny hopitaly tao an-toerana izy ary navotsotra.
Ary tamin'ny Janoary, novonoina, norobaina,nampitanjahan'ny vondron'olona teny an-dalambe tao an-tanànan'ny Bangalore ny vehivavy Tanzaniana 21 taona iray izay nianatra tao India noho ny fiheveran-diso fa nandona sy namono vehivavy tao an-toerana ny fiarany . Niharan'ny herisetra ihany koa ny telo tamin'ireo namany ary nodorana ny fiara izay nandehanan'izy ireo. Rehefa vita izany,nankany amin'ny trano izay nipetrahan'ireo mpianatra Afrikana ireo vondron'olona romotra ka nanafika azy ireo.
Nandritra ny taona faramparany, manao lasibatra teratany Afrikana sy taranak'olona Afrikana ny fanafihana tahaka izany izay atao lohateny lehibe an-gazety mandrakariva. Ka moa midika ve izany fa manana olana ara-panavakavaham-bolonkoditra amin'ireo Afrikana i India?
Tsia raha manontany ny Ministry ny Raharaham-bahiny Indiana Sushma Swaraj ianao, izay amin'ny ankapobeny mino ny fiarahamonina mirindra ary tsy vonona ny hanasokajy ny famonoana an'i Masonga Olivier Kitanda ho fanavakavaham-bolokoditra. Nanome toky i Swaraj fa ekipan'olona tsy mahay miaina fotsiny ihany no nanao ny herisetra, ary nilaza fa tsy rariny ho an'ny vahoaka Indiana ny fanasokajiana ny tranga ho manana endrika fanavakavaham-bolonkoditra .
Te-hanome toky ireo mpianatra Afrikana ato India aho fa ny olona adala ato an-toerana ihany no nanao ilay toe-javatra mampalahelo sy mampahonena.
Nampirisika ny Indiana tao amin'ny Twitter i Swaraj hilaza amin'ny Afrikana fa tia azy ireo ny Indiana ka hifandray tànana. Na dia izany aza, maro no nahita fa tsotra loatra na mihatsaravelatsihy izany manoloana ny herisetra vao haingana mamely Afrikana sy ny fanavakavahana izay mitohy amin'ny sehatra hafa amin'ny fiaraha-monina Indiana.
Na afaka 70 taona aorian'ny fahaleovantena aza, tsy ho afaka manao ny Indiana samy hifankatia isika, nefa tiany isika hilaza amin'ny Afrikana fa tiantsika izy ireo.
@SushmaSwaraj Angamba isika tokony hiasa amin'ny fanentanana tsara kokoa fa tsy amin'ny ankosotra fotsiny ihany. Ankilan'izany, tsy miankina amin'ny fitiavana ny zo. #AfricaIsNotACountry
Izaho : tia anao i India
Olom-pirenena Afrikana :Tsy firenena i Afrika
@SushmaSwaraj Mbola tsara kokoa. Mampirisika ny olona Indiana mba tsy hanavakava sy hankahala vahiny. Aoka isika hanova ny maha izy antsika . @apercevoir
Lazao izany fa “tia anao i India,” amin'ny silamo, Dalits, Afrikana, laika … dia mandehana miverina mandaka azy ireo amin'ny tavany?
Na izany aza , toa mieritreritra izany ho hevitra tsara ny mpisera Twitter vitsy an'isa.
Nanandrana izany i @SushmaSwaraj ary tena faly ilay zatovolahy Kenyana … nilaza tamiko fa maro ny Indiana miasa any Kenya ary tena nohajaina izy ireo ary mahatsiaro ho tsara
Ho an'ny mpiray tanindrazana Afrikana rehetra ,
Tia anao India.
Manjaka ‘ny Fiheveran-dison'ny fanjanahantany manoloana ny Afrikanina ‘
Tsy nangina fotsiny teo anatrehan'ny famonoana vao haingana ny Afrikana sy ny governemantany. Nitatitra i Al Jazeera fa nisy ekipan'ny masoivoho Afrikana iray tonga nitaraina hiaro ny olom-pireneny tao India, izay inoany fa miaina ao anatin'ny ” tahotra sy ny tsy fandriampahalemana” taorian'ny fanafihana nifanesy tamin'ny Afrikana . Nampitandrina izy ireo fa hampirisika ny governemantan'ny tsirairay tsy handefa mpianatra ho any India raha mitohy ny famonoana ka avela handositra tsy manana ahiahy ireo nahavanon-doza.
Tsy vao voalohany ihany izao no nanaitra ireo diplaomaty Afrikana ny olana. Tamin'ny 2015, talohan'ny andiany fahatelo tamin'ny Vovonana India-Afrika dia voalaza fa mihevitra ny hanao ankivy ny fankalazana ny Andron'i Afrika nokarakarain'ny Filankevitra Indiana isan-taona hisian'ny Fifandraisana Ara-kolontsaina ao Delhi, ny diplaomaty afrikana ao Delhi noho ny fankahalana hiainan'ireo olom-pireneny ao India.
Efa ho diplomaty 40 no nanao ankivy ny Andron'i Afrika
Naka sary ny Afrikana mitantara ny fanavakavaham-bolonkoditra tao India .
Ary nanome tsiny ny fampitam-baovao ny minisitra .
Ampy izay hoy izy
Nitantara ny zavatra niainany tamin'ny fanavakavahana tany amin'ny sehatra fampitam-baovao isan-karazany ny Afrikana sasany. Tao amin'ny lahatsoratra Scroll.in iray nivoaka tamin'ny 4 Jona, niresaka an-kolaka momba ny endriky ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny fanavakavahana ara-kolontsaina hita misy ao India ny mpianatra iray avy any Afrika Atsimo manana fiaviana avy any Azia Atsimo :
It was also not uncommon for many students to have conversations with me, which they assumed were progressive, about Africa and Africans that were based on crude colonial stereotypes of Africans as being close to nature, having a good sense of rhythm or even, and possibly the most colonial, having big penises. While many of the students at JNU had an impressively extensive knowledge of their own colonial, independence and post-independence cultural, political, social and religious, and regional histories, as well as knowledge of western theory and philosophy, and were committed to an idea of Left politics that took ideas like South-South solidarity seriously, their knowledge of African social, political and cultural histories as well as present realities was limited.
Maro ihany koa ny mpianatra no nifampiresaka tamiko, izay manaiky fa efa misy ny fivoarana, momba an'i Afrika sy ny Afrikanina mizaka fiheveran-diso avy amin'ny fanjanahantany ho mifanakaiky amin'ny natiora, mahatanty saoka tsara na, izay noheverina fa avy amin'ny fanjanahantany indrindra, hoe manana filahiana lehibe. Raha maro ny mpianatra tao amin'ny JNU no nanana fahalalana lehibe manaitra momba ny tantara ara-kolontsaina, ara-politika, ara-tsosialy sy ara-pivavahana, ary ny tantara isam-paritra nandritra ny fanjanahantany, ny fahaleovantena ary ny talohan'ny fahaleovantena, ary koa ny fahalalana ny teoria sy filozofian'ny tandrefana, dia resy lahatra izy ireo tamin'ny hevitra politikan'ny Elatra Havia ry zareo nakana hevitra amin'ny firaisankinan'ny samy Tatsimo, ny fahalalany ny tantara ara-tsosialy, ara-politika sy ara-kolontsainan'ny Afrikana ary ny zava-misy ankehitriny voafetra ihany.
Nisy ihany koa ireo hetsi-panoherana. Ohatra, nanakana lalambe fandehanana haingana ny Nizeriana maherin'ny 50 taorian'ny famonoana ilay olom-pirenena Nizeriana iray 36 taona Obodo Uzoma Simeona, teo an-tokotanin'ny trano fisakafoanana manao nahandro Afrikana iray tao Parra tao amin'ny faritanin'ny Goa tamin'ny 2013 . Najanon'izy ireo ny fiara nitondra ny vatan'i Simeona ary napetrany teo amin'ny làlana ny fatiny mba hisarihana ny saina ny amin'ny tranga sy hisorohana ny fanafenana ny nahavanon-doza.
Na izany aza, namaly ny hetsi-panoherana tamin'ny alalan'ny famoretana ireo Nizeriana tsy manan-taratasy ireo manam-pahefana, fanentanana iray izay toa mampiseho tsy fitiavana Afrikana vao maika ratsy kokoa. Nitohy ny tsy firaharahiana taorian'ny famonoana an'i Olivier Masonga Kitanda . Ho valin'ny raharaha fanolanana iray izay voalaza fa nahazo ny olompirenena Nizeriana iray, niampanga ireo Nizeriana teo imasom-bahoaka ho nanao heloka bevava tamin'ny tanjona hanalavana ny fipetrahany ao India ny minisitry ny fizahantany ao Goa. “Tokony hanana lalàna henjana isika izay mety ahafahantsika mandroaka azy ireo. Saingy indrisy fa tsy misy lalàna toy izany ao India amin'izao fotoana izao, “hoy izy.
Mampisalasala kely ny hoe nanala baraka an'i India manoloana ny fiaraha-monina iraisam-pirenena sy nanimba ny fifandraisany tamin'ny firenena Afrikana ny andiana fanafihana an'ireo olona Afrikana. Mitady hanome toky ireo ambasadaoro Afrikana sy ny olona ao India mihitsy i Sushma Swaraj amin'ny ezaka hanova ilay toe-javatra mampahonena. Nanafoana ny fihetsiketsehana tao an-drenivohim-pirenena vokatr'izany ny vondron'ny mpianatra Afrikana .
Antenaina, fa tsy ho ela dia ho an-dàlana mankany amin'ny filaminana sy fandriampahalemana ho an'ny Afrikanina sy ho an'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika rehetra ao India ny firenena.